Ahoana ny fomba hampiasana na hanafoanana ny Dashboard amin'ny macOS High Sierra | Avy amin'ny mac aho
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ary nahita ny fahombiazana kely nananany teo amin'ireo mpampiasa, Apple dia namela ny Dashboard hampihetsiketsika amin'ny tanindrazana, ilay efijery izay aseho ho birao iray hafa izay misy andiana widget miaraka amin'ny mombamomba ny toetr'andro, ny calculera, ny sandan'ny fizarana, ny fifandraisana, ny kalandrie ...
Misaotra ny Dashboard azontsika atao miditra haingana amin'ireo widgets / apps asehon'izy ireo anay fa tsy mila manokatra azy ireo tsy miankina. Na izany aza, mety tsy ho tsapanao fa hitanao ny nahatonga ny Dashboard lasa ampahany amin'ny birao ary tsy manana ianao nefa tsy manana fikasana kely akory hampiasa azy.
Raha te hiditra amin'ny Dashboard dia mila mampandeha ny fifehezana ny Misiona fotsiny isika ary mankanesa any amin'ny birao voalohany, ilay birao voalohany izay tena ny Dashboard izay misy ny widgets rehetra mamela antsika hampiasa ny rafitra. Saingy tamin'ny fahatongavan'ireo widgets tao amin'ny foibe fampandrenesana, ny Dashboard dia nitsahatra tsy nanana ny heviny nananany tany am-boalohany. Raha tsy fanahy iniana na niniantsika nampiasana azy io, etsy ambany izahay dia mampiseho aminao ny fomba ahafahanay mamono azy io maharitra.
Alefaso na esory ny Dashboard amin'ny macOS High Sierra
Na dia natao ho an'ireo mpampiasa ny kinova farany farany an'ny macOS hita eny an-tsena aza ity fampianarana ity, High Sierra, amin'ny kinova taloha ny dingana tokony harahina dia mitovy ihany.
Voalohany indrindra alehantsika Taratasy rafitra.
Manaraka izany dia mankany Fanaraha-maso ny iraka
Tao anatin'ny Mission Control dia niroso izahay Dashboard ary tsindrio ny boaty mitete-midina mifantina ny safidy Novonoiko. Hanjavona tanteraka amin'ny Mission Control ity.
Raha te hampihetsika azy isika dia mila mifidy fotsiny Toy ny habakabaka o Amin'ny maha overlay azy Anisan'ireo safidy aseho ao amin'ny menio mitete-nidina izay nisafidianantsika Disabled taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny Dashboard amin'ny macOS High Sierra
Meridio, fehin-tànana vita amin'ny tanana ho an'ny Apple Watch
Apple AirPods dia hahazo fanamarinana hanoherana ny rano sy ny fiasa "Hey Siri"